Nalàn’i Torkia ny fanakànana ny YouTube, saingy ho fotoana fohy monja ve izay famahàna izay? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2010 6:24 GMT
Tamin'ny 2007, voalohany i Torkia no nanakana ny tranonkala Youtube fifampizaràna lahatsary, nanaraka ny dian'ireo firenena 12 na mihoatra izay efa nanao toy izany tamin'ny fotoana'andro, nahitàna an'i Arménie, Siria, Maraoka, ary Tonizia. Avy eo ilay tranonkala dia azo nidirana tsindraindray tamin'ny 2007, ary niafara tanteraka tamin'ny fanakànana azy indray tamin'ny 2008, fanakànana izay nitohy hatramin'ny fiandohan'ity herinandro ity, rehefa nambara fa niverin-dàlana ny governemanta Tiorka tamin'ny farany ka nanàla ny fandraràna.
Nandritr'ireo roa taona lasa, nisy fitomboany betsaka ny fanoherana ny sivana atao amin'ny aterineto ao Torkia, nanomboka tany anaty aterineto ary tato ho ato, nirotsaka an-dalambe. Amin'izao fotoana, ireo Tiorka mponin'ny aterineto dia nankamamy tokoa ny fahafahany miditra malalaka kokoa.
Dr. Yaman Akdeniz manampahaizana momba ny tranonkala dia mampitandrina fa mety ho fotoana fohy monja izao fientanentanana izao:
Azo jerena ato ireo fikarohana vao haingana nataon'ny OpenNet Initiative mikasika an'i Torkia.